crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Maalinta Raadiyada Dunida ee 13 Febraayo oo la xusay | HimiloNetwork
Maalinta Raadiyada Dunida ee 13 Febraayo oo la xusay
Posted by: Zakariya in Wararka February 13, 2017	0 258 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kulan lagu maamuusayay laba sannad-guuradood oo ku asteysan 13-ka Febraayo oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee warbaahinta, midowyada saxaafadda ee heer gobol iyo qaran, qorayaal iyo ururrada bulshada rayidka sida daladda aan dowliga ahayn ee Socensa ayaa lagu qabtay Hotelka Ramada ee magaalada Muqdisho.
Xuska maalinta raadiyada dunida waxaa ku lamaannaa xuska sanad-guurada 4aad ee Hey’adda SOMA oo horay loo oran jiray Network 13 taas oo la aas’aasay sanadkii 2013.
Ugu horreynba, waxaa madasha xafladda ka hadlay xoghayaha hey’adda soo qaban-qaabisay munaasabadda ee SOMA, Ismaaciil Shiikh Khalifa kaas oo ku dheeraaday kaalinta ay raadiyaashu kaga jiraan adeegga warbaahinta. Khalifa ayaa tilmaamay waxa ay maanta uga dhigan tahay raadiyada.
“Waa maalin farxad inoo leh; waa maalin aan inaga leennahay; sida aan u buunbuunino maalmaha kale, waa inaan innagana uga hadalnaa maalinteenna,” ayuu yiri Khalifa, oo sidoo kale ah agaasimaha idaacadda Star FM.
“Kaba tole, kaba tol kana kaba la’ ayay Soomaalidu tiraahdaa. Waa inaan si lamid ah munaasabadaha kale u xusnaa xuska Maalinta Raadiyada,” ayuu sii raaciyay.
Suxufiyiin hore oo berisamaadkii soo shaqeeyey ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madasha. Abdullahi Maxamud Sheegow, oo ah qoraa iyo suxufi ruug-cadaa ah kaas oo sidoo kale kasoo shaqeeyey warfaafinta qaranka ee Radio Muqdisho 60-meeyadii ayaa ku faanay sida mihnadda saxaafadeed ee rag uu isagu kamid yahay ay uga howl-gabayaan u heshay da’yar u geyfan una heelan horumarinteeda.
“Aniga waan ku bogaadinaya kaalinta ay warfaafinta maanta ku yeesheen is-badallada dhacaya, waxaad istuseen madaxda iyo shacabka; waxay shaqadiinu suuragalisay xiriirka bulshada ka wada dhaxeeya,” ayuu yiri Ustaad Sheegow oo kamid ahaa wariyayaashii soo maray Radio Muqdisho sanadkii 1966-kii.
“Waxaad runtii rajo geliseen dad aan anigu kamid ahay oo maanta u jeeda in xirfaddii ay ku shaqeyn jireen ay heshay hiil iyo da’yar u kacday horumarintiisa.”
Mana ahayn oo kaliya wariyayaashii warfaafinta shalay iyo maanta kuwo ka aragti dhiibtay xuska sanad-guurada maalinta raadiyada adduunka. Bahda wargeysyada ayaa sidoo kale ku sugnaa madasha.
Ustaad Axmed Dhsicisow, oo madax ka ah ururka midowga wargeysyada Muqdisho ayaa ku taliyay in idaacaduhu laballaabaan dardar-gelinta iyo hagaajinta howlahooda. Dibna ugu laabtaan sooyaalkooda.
“War idaacaddan ninkii bilaabay waa inaad barataan; Xaaji Abdi Du’ale, oo kamid ah Radio Hargeisa ayaa ah ninkii bilaabay kahadalka idaacad ku hadasha af-Soomaali. Waa inaad yeelataan keyd qoran iyo dib u milicsataan wixii idin qabsamay oo aad is abaal-marisaan,” ayuu yiri Dhisicow oo intaas kusii daray; “Waxad fursad u heshaan inaad gashaan guri kasta, isku daya marka inaad is hormarisaan.”
Maahir Jaamac Aadan oo ah guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ oo gabagabadii xafladda lasiiyay inuu khudbadaha ku darsado waaya’aragnimadiisa ayaa si kooban isku dul-taagay waqtiyo kala duwan oo saxaafaddu soo martay.
In kasta oo uu xusay siday ugu dhabar-adeygeen ku shaqeynta xaaladaha adag, hadana wuxuu warfaafinta u tilmaamay in hankoodu ka saramaro madadaalo iyo wixii la halmaala.
“Waxyaabaha dadku aanay arkeyn inaad iftiimisaan ayaa muhiim ah,” ayuu Maahir yiri. “Muhiim uma arko in idaacadaha 70% ay ku lumiyaan madadaalo iyo nambar qabso, laakiin dhaqanka bulshada in la abaaro iyo in si hoose loola falgalo waxay sameyn kartaa is-baddal muuqda.”
Hal-ku-dhaga sanadkan ee xuska sanad-guurada shanaad ee maalinta raadiyaha dunida ayaa laga dhigay Raadiyuhu waa adiga.
Previous: Maqaayad risiidkeeda ku qorta: Soo-galootiyow ka dhig America mid weyn,”
Next: Lakulan: Ninka heysta 15 shahaadooyin jaamacadeed ah
Jaamacad ogol in badalkii lacagta ardayda saboolka ah isku diiwaan-geliyaan bariis
Masjidkii UGU horreeyey oo laga dhisayo Caasimadda Athens.
La kulan – Ninka 25 jeer ku dhacay Imtixaanka Qubuulka Jaamacadda.
Saameynta Covid-19 uu Dadkeenna ku reebayo!
Xoogsato: Muruqiinu ha milgoobee, Miyirkiinna kaashada